कसरी गर्दै छ एनआरएनले पूर्वाधार क्षेत्रमा १० अर्बको लागनी ?
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । चालू लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन सरकारले विभिन्न उच्च तहका परियोजनाहरुमा भटाभट सहमति गरेको ।
यो उचाइलाई विज्ञहरुले ‘उपलब्धिमूलक’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
चालू लगानी सम्मेलनमा सरकारले गैह«आवासीय नेपालीदेखि विदेशी दातृ तथा निजी क्षेत्रसँग ‘गेमचेन्जर’ परियोजनाहरुमा सम्झौता गरेर सावैजनिक नै गरेको हो ।
लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन सरकार तथा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) बीच नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा १० अर्ब लगानी गर्ने सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नै भएको छ ।
उक्त लगानीबारे एनआरएनका तर्फबाट अध्यक्ष भवन भट्ट र सरकारका तर्फबाट उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कसरी गरिन्छ लगानी ?
सम्झौता पछि लगानी प्रक्रियाबारे अध्यक्ष भट्टले भने, भने, ‘हामीले गरेको हस्ताक्षरलाई विधि र संरचनामार्फत् लगानी गर्ने छौं । निर्माण सञ्चारसँग उनले भने, ‘सम्झौतासँगै हामी अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट कोष स्थापना गर्ने कुरा नै भइसकेको छ । मार्फत हामीले लगानी गर्ने छौं ।’
एनआरएनएले आफूहरु मार्फत् आउने लगानी छरिएर नभई अब एकमुष्ठ रुपमा आउने बताएको छ । पूर्व अध्यक्ष जिवा लामिछाने अनुसार नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा आफूहरुले गर्ने लगानीबारेको प्रस्ताव सरकारले केही दिन अघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गरेको थियो ।
सम्झौता अनुसार सरकार र एनआरएनबीच एउटा कोष तयार हुने छ ।
पूर्वाधार लगानी कोषका रुपमा रहने उक्त कोषमा ५ प्रतिशत रकम प्रारम्भिक कोषमा जम्मा गरिनेछ । त्यसै गरी सोही बराबरको रकम अर्थात् ५ प्रतिशत नेपाल सरकारले पनि जम्मा गर्ने छ ।
जुन कोषको अधिकृत पुँजी २० अर्ब तथा चालु पुँजी १० अर्ब रहने छ । उक्त बाँकी रकम जुटाउँदा नेपाल बाहिर रहेका गैरआवासीय नेपाली यसमा सेयर लगानीकर्ता बन्ने छन्
त्यसै ठाउँमा नेपालको निजी क्षेत्रले पनि रकम जम्मा गर्ने छ । त्यसरी जम्मा भएको १५ प्रतिशतबाट बाँकी ८५ प्रतिशत रकम एनआरएनले आइपिओ मार्फत् जुटाउने छ ।
जुन कोषको अधिकृत पुँजी २० अर्ब तथा चालु पुँजी १० अर्ब रहने छ । उक्त बाँकी रकम जुटाउँदा नेपाल बाहिर रहेका गैरआवासीय नेपाली यसमा सेयर लगानीकर्ता बन्ने छन् ।
भट्टले दिएको जानकारी अनुसार बाँकी ८५ प्रतिशत रकम जुटाउने दायित्व एनआरएनएको हुनेछ । नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार नै खर्च गरिने पनि उनले बताए ।
नेपाल सरकारले विदेशी लगानीबारे आवश्यक ऐन कानुन नै संशोधन गरिसकेकाले आफूहरु उत्साही भएको उनले बताए ।
आउने दिनमा एनआरएनएले नेपालमा गर्ने लगानी सबै कोषमार्फत् नै गर्ने नीति अख्तियार गर्ने छ । एनआरएनएले नेपाल सरकारसँग भएको यो सहमतिलाई ऐतिहासिक संज्ञा दिएको छ ।
लगानी सम्मेलनः प्रतिपक्षीदेखि विदेशीसम्म सकारात्मक, सरकार उत्साहीः गेमचेन्जर परियोजनामा सम्झौता हुने